Liverpool oo dhanka EPL uga kharash badnaanaysa Man City, xitaa haddii aysan horyaalka qaadin (Sababta & kharashka ay kooxaha dhami helayaan?) | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Liverpool oo dhanka EPL uga kharash badnaanaysa Man City, xitaa haddii aysan...
Liverpool oo dhanka EPL uga kharash badnaanaysa Man City, xitaa haddii aysan horyaalka qaadin (Sababta & kharashka ay kooxaha dhami helayaan?)
(London) 12 Maajo 2019 – Kooxda Liverpool ayaa la sheegay inay qaadan doonaan lacag ka badan midda Manchester City dhanka Premier League — xitaa haddii ay kooxda Jurgen Klopp koobka qaadi wayso.
Liverpool ayaa sidaa ku mutaysanaysa maadaama ay ka caansan tahay lagana jecel yahay kooxda City marka la eego hilinnada soo duwayey ciyaaraha Ingiriiska.
Kooxda ugu khasaaro badan sanadkan marka gunnada ay siiyaan laacibiintooda waa Manchester United: waayo dhibic kasta oo ay horyaalka ka heshay waxay ugu kacaysaa £100,000 oo gini.
Kulamada ay Liverpool dheeshey waxaa toos loo sii daayay 29 jeer oo laga daawaday Sky Sports iyo BT Sport — taasoo laba jeer ka badan koox kastoo kale. Waxaa xigta Manchester United oo la sii daayay 27 jeer, halka City, xitaa markii lagu daro kulanka Brighton, la baahiyay 26 jeer oo toos ah.
Naadiyada ayaa asal ahaan xaq wadareed u leh £12.5m oo ay ciyaartooda uga helayaan TV-yada, iyagoo xaq u yeelanaya £1.2m oo dheeraad ah haddii TOOS loo baahiyo wax ka badan 10 kulan oo ay ciyaartay.
Sidaa darteed 29 kulan oo TOOS loo daayay ciyaaraha Liverpool waxay ku kasban doonaan £3.4milyan oo gini, taasoo ka dhigaysa kooxda guud ahaan sanadkan ugu dakhliga badan EPL, ugu yaraan dhanka TV-yada.
Previous articleMaxkamadda Garoowe oo xukunno adag ku riddey dadkii ku eedaysnaa dilkii & kufsigii Caa’isha Ilyaas (Dil toogasho ah)
Next articleAC Milan & Inter oo Liverpool taageeraya CL Final (Maxay tahay sababtu?)